caafimaadka; Jooji sigaar cabidda: sidee looga takhalusaa tobaakada? - KU SAMEEYSAA
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB Caafimaadka; Jooji sigaar cabidda: sidee looga takhalusaa tobaakada?
caafimaadka; Sigaar joojinta: Sidaad uga takhalusi lahayd tubaakada?
TCHINDA FRANCINE 20 February 2019
Faransiiska ayaa leh qiyaastii 16 milyan oo sigaar cabayaal, kuwaas oo 78.000 ay dhintaan sanad kasta natiijadan qabatinka. Joojinta sigaarku waa go'aan faa'iido leh, laakiin doonista kaligeed uma dammaanad qaadi karto guusha. Caawinaad gudhintiisuna Waxaa jira dad badan murugada si loo beddelo nicotine.
Jooji sigaarka. © Myriams-Sawiro, Domain Public
In kasta oo ay jirto khataraha la xaqiijiyay Kansarka, ee cudurrada wadnahaiyo kuwa kale, sigaar cabbayaashu wali way badan yihiin. Dhalinyarada waxay si gaar ah u bilaabaan horraantii hore iyo wixii ka horeeya, dhibaatadu markaa waxay awood u leedahay inay joojiso, sababtoo ah sigaarku waa wax xadidan.
Jooji sigaar cabista si aan sigaarka u sii waari doonin. © Freefoto, CC by-nc-nd 3.0
Faylkani wuxuu ku siinayaa furayaasha sidaad sigaarka u joojin lahayd. Waxay marka hore ka hadlaysaa khataraha tubaakadaoo wuxuu si faahfaahsan u sharraxaa ifafaalaha ku tiirsanaanta (neerfayaasha, dareenka iyo nafsadda). Sababaha togan iyo kuwa taban ee joojinta sigaar-cabista guuleysta ayaa la aqoonsaday, iyo qaababka kala-joogsiga joojinta sigaarka ayaa la sharxay. Ugu dambeyntii, dhakhtarku wuxuu ina siinayaa ra'yigiisa iyo waayo-aragnimadiisa uu wajahayo caqabada joojinta sigaarka.
Tallaalka iyo baaritaanka waxay ciribtirmi kartaa kansarka ilma-mareenka
Caafimaadka: Khatarta sigaarka